Atụmatụ okporo ụzọ ọdụ ụgbọ elu Fraport kacha ọhụrụ maka Septemba 2021: Ọ dị mma!
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airport » Atụmatụ okporo ụzọ ọdụ ụgbọ elu Fraport kacha ọhụrụ maka Septemba 2021: Ọ dị mma!
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • News • Ndi akuko • Iwughachi • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Ọdụ ụgbọ elu Frankfurt (FRA) nabatara ụfọdụ ndị njem nde 3.1 na Septemba 2021-na-anọchite anya mmụba 169.1 pasent kwa afọ, n'agbanyeghị na e jiri ya tụnyere Septemba 2020 nke na-esighi ike.
Ọganihu ndị njem na -aga n'ihu na -abụkarị njem okporo ụzọ ezumike. N'ime ọnwa mkpesa, ọnụọgụ ndị njem FRA-ka ọ na-ezipu mbelata pasent 54.0 ma e jiri ya tụnyere Septemba 2019-rutere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara ọkwa ọrịa na-efe efe, wee si otú a na-aga n'ihu na-eme nke ọma na August 2021.
N'ime ọnwa itoolu mbụ nke 2021, FRA jere ngụkọta nke ndị njem ruru nde 15.8. Nke a butere mbelata pasent 2.2 ma e jiri ya tụnyere oge ahụ n'afọ gara aga, na ndapụta pasent 70.8 ma e jiri ya tụnyere ọnwa itoolu mbụ nke 2019.
Mbupụ ụgbọ elu (ikuku ikuku + ozi ikuku) gara n'ihu na-eto nke ọma na Septemba 2021, na-arịba ama nke ukwuu site na pasent 13.4 kwa afọ ruo tọn metric 188,177.
Tụnyere Septemba 2019, ibu ibu nwetara pasent 7.7 n'ime ọnwa mkpesa. Mmegharị ụgbọ elu rịgoro site na pasent 66.1 kwa afọ ruo n'ụgbọ elu na ịrị elu 28,135. Mkpokọta oke ịwepụ ibu (MTOW) mụbara site na pasent 61.5 ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde tọn metric 1.8.
N'ọnwa Septemba 2021, ọdụ ụgbọ elu dị na Pọtụfoliyo mba ofesi Fraide gara n'ihu na -akọ akụkọ ọma okporo ụzọ. Ewezuga ọdụ ụgbọ elu Xi'an (XIY) dị na China, ọdụ ụgbọ elu Fraport nke Group nwetara nnukwu mmụba. Na ụfọdụ ọdụ ụgbọ elu otu, okporo ụzọ ndị njem rịrị elu karịa 100 pasent n'afọ-n'agbanyeghị na atụnyere ọkwa okporo ụzọ belatara nke ukwuu na Septemba 2020. N'iji ya tụnyere ọrịa na-efe efe tupu Septemba 2019, ọtụtụ ọdụ ụgbọ elu Fraport Group n'ụwa niile ka edebara aha ọnụ ọgụgụ ndị njem ala. Agbanyeghị, ụfọdụ ọdụ ụgbọ elu Group na-eje ozi njem nlegharị anya dị oke mkpa-dị ka ọdụ ụgbọ elu Greek ma ọ bụ ọdụ ụgbọ elu Antalya na Riviera Turkish-hụrụ ka okporo ụzọ maliteghachiri ihe ruru pasenti 80 nke ọkwa ọgba aghara na ọnwa mkpesa (ma e jiri ya tụnyere Septemba 2019).
Ọdụ ụgbọ elu Ljubljana (LJU) na isi obodo Slovenia nabatara ndị njem 65,133 na Septemba 2021. N'ọdụ ụgbọ elu Brazil nke Fortaleza (FOR) na Porto Alegre (POA), okporo ụzọ jikọtara ọnụ ruru 820,169 ndị njem. Ọdụ ụgbọ elu Lima nke Peru (LIM) natara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mmadụ 1.1 n'ime ọnwa mkpesa.
Mkpokọta okporo ụzọ maka ọdụ ụgbọ elu mpaghara Gris 14 ruru ihe ruru nde mmadụ nde 3.4 na Septemba 2021. N'akụkụ oke osimiri Bulgarian, ọdụ ụgbọ elu Twin Star nke Burgas (BOJ) na Varna (VAR) kọkwara okporo ụzọ dị elu yana ngụkọta nke ndị njem 328,990 jere ozi. . Ọdụ ụgbọ elu Antalya (AYT) na Turkey nabatara ihe dị ka nde ndị njem nde 3.8. Ọdụ ụgbọ elu Pulkovo nke St. Petersburg na Russia nwere ihe dị ka nde ndị njem nde 1.9. Ọdụ ụgbọ elu Xi'an (XIY) dị na China dekọtara ihe na -erughị nde ndị njem nde 2.3 n'ọnwa mkpesa.
Budata data okporo ụzọ (PDF)